Izindaba - Sigxila ekwakheni umoya weqembu eliphezulu
Sigxila ekwakheni umoya weqembu eliphakeme
Inani likaNingbo Zodi lakha umoya weqembu eliphakeme .Sibambe uhambo lwezinsuku ezimbili eMaoyang County, eXiangshan ngo-Agasti 20, phakathi nezinsuku esasijabulela ukudla kwasolwandle okumnandi nokuntweza olwandle. Thatha ikhefu emsebenzini wakho omatasa ukuze ujabulele ukuthula kwendalo.Sihlala usuku lonke kusukela ekuseni kuze kube sebusuku nozakwethu nomndeni, sijabulela impilo ejabulisayo eceleni kwalabo abasebenza.
Ngakolunye uhlangothi, ithimba lizokwabelana ngemikhiqizo ehlukene yolwazi kubo bonke abasebenzi abasebenzisa i-PPT nesampula ekhombisa, futhi bamema ochwepheshe bezimboni ukuthi bathuthukise imininingwane eminingi (kufaka phakathi izinto, ulayini wokukhiqiza, ubuchwepheshe bokukhiqiza, izindlela zokuhlola, ukwelashwa kwendawo, ukupakisha, ukulethwa, intengo njll. …) .Ngokukhombisa isilinganiso, kuthuthukisa ulwazi lwethu lobungcweti futhi kuthuthukise ukuzethemba kwethu.
Kuyamukelwa kabanzi ukuthi ukusebenza ngokuzimela kunenzuzo esobala yokuthi kungafakazela ikhono lomuntu. Kodwa-ke, ngikholelwa ukuthi ukusebenzisana kubaluleke kakhulu emphakathini wanamuhla futhi ukusebenzisana ngokubambisana sekuyikhwalithi edingekayo yizinkampani eziningi ngokwengeziwe.
Okokuqala, sitholakala emphakathini onzima futhi sihlangana nezinkinga ezinzima ezingaphezu kwamandla ethu. Kungalesi sikhathi lapho ukusebenzisana kufakazela khona ukuthi kubaluleke kakhulu. Ngosizo lweqembu, lezi zinkinga zingaxazululwa kalula futhi ngokushesha, okungathuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi.
Okwesibili, ukusebenzisana kunika ithuba lokusebenzisana nozakwabo, kuzokwenza indawo yomsebenzi enobungane nejabulisayo, okuyinto ebalulekile ethinta inkolelo yabasebenzi enkampanini njengendawo yokusebenza enhle.
Ekugcineni, ukusebenzisana kubamba iqhaza ekuchumeni kwezinkampani. Ngolwazi lwabo bonke osebenza nabo luhlangene, izinkampani zisebenza kahle kakhulu emsebenzini kanye nekhono lokubhekana nanoma yiziphi izinkinga. Ngenxa yalokhu, izinkampani zingenza inzuzo ethe xaxa futhi zithuthuke ngokushesha okukhulu.
Ngokuphelele, ukusebenzisana kubaluleke kakhulu, akekho noyedwa ongaphila yedwa, kumele bathembele kwabanye ngandlela thile. Ngakho-ke, ukusebenza ngokubambisana kungenza impilo ibe lula.Ukuze sihlangabezane nezidingo zokuthuthuka komuntu siqu kanye nomphakathi oyinkimbinkimbi.Sifanele sifunde ukubambisana futhi sivumelane komunye nomunye.Kungale ndlela kuphela lapho singafinyelela impumelelo futhi sizenelise thina kanye umphakathi.